Abenzi be-China KZJ Series Product Product IKAIQUAN
KZJ uchungechunge slurry amaphampu, single-esiteji ovundlile-uhlobo centurifugal slurry amaphampu, kukhona entsha-uhlobo bafake & ukugqwala ukumelana slurry amaphampu lakhiwa inkampani yethu Shijiazhuang. Ngokufunwa kwamaphampu e-slurry ayanda ngamandla kagesi, insimbi, ubunjiniyela bamakhemikhali, izinto zokwakha.
KZJ uchungechunge slurry amaphampu, single-esiteji ovundlile-uhlobo centrifugal slurry amaphampu, kukhona okusha-hlobo bafake & ukugqwala slurry ukumelana amaphampu lakhiwa Shijiazhuang yethu inkampani. Ngesidingo samaphampu e-slurry ayanda ngamandla kagesi, insimbi, ubunjiniyela bamakhemikhali, izinto zokwakha, nezinye izimboni eziyisisekelo, futha lokucatshangelwa kwezimo zokusebenza eziyinkimbinkimbi nezicacisiwe ze izicelo athuthukiswe. Le nkampani isebenzisa izinzuzo zokuthuthuka ubuchwepheshe nempumelelo ekhaya nakwamanye amazwe lapho kuklanywa u-hydraulic amamodeli nezakhiwo nokukhetha izinto ezingamelana nokugqoka kulolu chungechunge lwamaphampu.
Ngaphezu kwalokho, uKaiquan ungeze ezintsha zayo ezihlukile izici zokuklama kulokhu uchungechunge. Amaphampu ane- izinzuzo zokuba phezulu esebenza kahle, ngamandla aqinile ukonga umthamo, vibration kancane, umsindo ophansi, ukusebenza okuthembekile, impilo ende yokusebenza futhi kulula isondlo. Amaphampu ' ukusebenza kufinyelela kwasekhaya Izinga eliholayo, nokusebenza kahle Inkomba yamaphampu amaningi ifinyelela emazweni athuthukile izinga. Imininingwane yemikhiqizo ziyahambisana ne- Izindinganiso ze-JB / T8096-1998 zamaphampu weCentrifugal Slurry Pumps.
Langaphambilini I-WQ / YT Isethulo Esenziwe Ngomshini Esenziwe Ngompompo Esenziwe ngaphambilini
Olandelayo: I-KZJXL Series Icwilise Amaphampu E-Slurry
Udizili Wokulwa Namanzi Pump
Amaphampu Wokulwa Komlilo Udizili
Udizili Pump For Fire Ukulwa System
Iphampu Yamanzi Idizili Yomlilo
XBD Series Double ukuncela Firefighting Pump
I-XBD-DP Series Pump Fireingighting Pump
I-XBD Single Stage Fire Pump
Isethulo Somkhiqizo Wochungechunge lwe-KQTL
Izinsiza kusebenza ze-W Seeries Stabilized Pressure Equipment